मोटरयुक्त भल्भ, वायमेटिक एक्चुएटर भल्भ र सोलेनोइड भल्भ निर्माता
इलेक्ट्रिक एक्चुएटर भल्भ
बिजुली बटरफ्लाइ भल्भ
मोटर चालित बल भल्भ लघु प्रकार
इलेक्ट्रिक गेट भल्भ
इलेक्ट्रिक ग्लोब भल्भ
इलेक्ट्रिक नियन्त्रण भल्भ
वायवीय एक्चुएटर भल्भ
वायवीय बटरफ्लाइ भल्भ
वायमेटिक चाकू गेट भल्भ
वायवीय नियन्त्रण भल्भ
वायमेटिक कोण सीट भल्भ
सामान्य उद्देश्य Solenoid वाल्व
वाटरप्रूफ Solenoid वाल्व
खाद्य ग्रेड Solenoid वाल्व
उच्च तापमान Solenoid वाल्व
विरोधी संक्षारक Solenoid वाल्व
टाइमर संग Solenoid वाल्व
विस्फोट-प्रूफ Solenoid वाल्व
3 मार्ग Solenoid भल्भ
म्यानुअल बटरफ्लाइ भल्भ
म्यानुअल बल भल्भ
दबाव घटाउने भल्भ
क्याटलग र डाटाशीट
COVNA को बारेमा
गुणस्तर र प्रमाणपत्रहरू
भिजन र मिशन
भल्भ बारे ज्ञान
स्वचालित भल्भ विशेषज्ञ
तपाईंको भल्भ आवश्यकताहरू पूरा गर्न एक-स्टप भल्भ समाधान प्रस्ताव गर्दै
COVNA इलेक्ट्रिक एक्चुएटर भल्भ श्रृंखला
तपाईंको भल्भ आवश्यकताहरू पूरा गर्न एक-स्टप स्वचालित भल्भ समाधान।
COVNA वायमेटिक एक्चुएटर भल्भ श्रृंखला
तपाईंको भल्भ आवश्यकताहरू पूरा गर्न एक-स्टप स्वचालित भल्भ समाधान
COVNA बहु-टर्न एक्चुएटर भल्भ श्रृंखला
COVNA फीचर्ड भल्भहरू
तपाईंको छनोटको लागि सबै प्रकारका एक्चुएटर भल्भहरू प्रस्ताव गर्दै
इलेक्ट्रिक एक्चुएटर भल्भहरू
COVNA इलेक्ट्रिक एक्चुएटर भल्भहरू बल/बटरफ्लाइ/गेट/ग्लोब भल्भ प्रकारहरूमा उपलब्ध छन् तपाईंको भल्भ आवश्यकताहरू पूरा गर्न
वायवीय एक्चुएटर वाल्व
COVNA वायमेटिक एक्चुएटर भल्भहरू वसन्त रिटर्नमा उपलब्ध छन् र तपाइँको एक्चुएशन आवश्यकताहरूको लागि डबल-अभिनय प्रकारको एक्चुएटरहरू
COVNA स्वचालित एक्चुएटर इलेक्ट्रिक एक्चुएटरहरू र वायमेटिक एक्चुएटरहरूमा उपलब्ध छ तपाईंको एक्चुएसन आवश्यकताहरूको लागि
किन COVNA भल्भहरू छान्नुहोस्?
एक्चुएटर भल्भको अग्रणी निर्माता हुन
उत्पादनहरूको पूर्ण श्रृंखला
वाल्व अनुकूलन सेवा
एक-स्टप खरीद सेवा
प्राविधिक र दस्तावेज समर्थन
चीनको एक अग्रणी भल्भ निर्माताको रूपमा, COVNA ले 2000 देखि भल्भको R&D, डिजाइन र उत्पादनमा जोड दिइरहेको छ, र विभिन्न उद्योगहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्न र उद्योगलाई प्रक्रिया नियन्त्रण समाधानहरू समाधान गर्न मद्दत गर्न आफ्नो उत्पादन श्रृंखला विस्तार गर्दै आएको छ।
थप रूपमा, हामी तपाइँको actuation आवश्यकताहरू पूरा गर्न भल्भ actuators श्रृंखला को एक विस्तृत श्रृंखला पनि प्रदान गर्दछ। विभिन्न actuators ले तपाईंलाई रिमोट कन्ट्रोल महसुस गर्न र ईन्जिनियरिङ् विश्वसनीयता सुधार गर्न मद्दत गर्दछ।
हामीलाई थाहा छ कि कहिलेकाहीँ परम्परागत भल्भहरू केही विशेष अनुप्रयोगहरूको लागि उपयुक्त नहुन सक्छ। तसर्थ, हामी भल्भ सुनिश्चित गर्नको लागि तपाइँको अनुप्रयोगको लागि भल्भ अनुकूलन सेवाहरू प्रदान गर्दछौंप्रस्ताव गर्न सक्छ तपाईंको परियोजनामा ​​उत्कृष्ट तरल पदार्थ नियन्त्रण समाधान।
20 वर्ष भन्दा बढी भल्भ अनुभवले हामीलाई विभिन्न उद्योगहरूको आवश्यकताहरू गहिरो रूपमा बुझ्न मद्दत गरेको छ। हामी उद्योग उन्मुख हुनेछौं र तपाईंलाई दर्जी-निर्मित तरल पदार्थ समाधानहरू प्रदान गर्नेछौं। हाम्रो लक्ष्य भनेको तपाईंको परियोजनालाई उत्पादन दक्षता सुधार गर्न र लाभ योजनाहरू अनुकूलन गर्न मद्दत गर्नु हो।
हामीलाई थाहा छ कि खरिद प्रक्रियामा धेरै समस्याहरू आउनेछन्, जस्तै भुक्तानी विधि, रसद, वार्तालाप र यस्तै अन्य। COVNA सँग विश्वव्यापी व्यापारमा २० वर्षभन्दा बढी अनुभव छ। ग्राहकहरूलाई उपयुक्त भल्भ र एक्चुएटरहरू छनोट गर्न मद्दत गर्नुको साथै, हामी ग्राहकहरूलाई समय बचत र लागत बचत उत्पादन डेलिभरी प्रक्रिया प्रदान गर्न सक्दो प्रयास गर्नेछौं।
एकै समयमा, COVNA सँग २ गोदामहरू छन्, जसले तपाइँको भल्भको आवश्यकतालाई तुरुन्तै प्रतिक्रिया दिन र छिटो डेलिभरी सेवाहरू प्रदान गर्न सक्छ।
COVNA सँग3उत्पादन आधार र2गोदामहरू छन्। हामी ग्राहकहरूलाई छिटो डेलिभरी सेवाहरू प्रदान गर्न कोसिस गर्छौं। एकै समयमा, हाम्रो व्यावसायिक बिक्री टोलीगर्न मद्दत गर्नेछ तपाइँको परियोजना ढिलाइ भएको छैन भनेर सुनिश्चित गर्न को लागी तपाइँको लागि एक खरीद तालिका सेट अप गर्दछ।
हामी तपाईंलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं। भल्भका विशेषताहरू राम्ररी बुझ्न र भल्भको राम्रो प्रयोग गर्न मद्दतको लागि, हामी तपाईंलाई अनलाइन प्राविधिक समर्थन र नि:शुल्क कागजात समर्थन प्रदान गर्नेछौं। तपाईको परियोजनालाई सहज रूपमा चलाउन मद्दत गर्ने आशा छ।
प्रमाणपत्रहरू उत्पादनको गुणस्तर प्रमाणित गर्ने उत्तम तरिका हो। हामीसँग ISO9001:2015, CE, SGS, TUV, FDA र ३० भन्दा बढी पेटेन्टहरू छन्। प्रत्येक उत्पादनको उत्पादन प्रक्रियाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई कडाईका साथ पालना गर्नेछ।
COVNA सँग सहकार्य गर्दै
हाम्रा सेवाहरूको आनन्द लिनुहोस् र तपाईंको व्यापार रकेटलाई मद्दत गर्नुहोस्
अन्त-प्रयोगकर्ता र ठेकेदारको लागि
उत्पादन गुणस्तर ग्यारेन्टी
अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादन मापदण्ड र परीक्षण उत्पादन प्रदर्शन सुनिश्चित गर्दछ
तपाइँको समाधान समाधान गर्न मद्दत गर्न प्राविधिक समर्थन
तपाईंको लागि अनुकूलन तरल समाधान
हामी तपाईंको आवश्यकताहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नेछौं र तपाईंलाई दर्जी-निर्मित समाधानहरू प्रदान गर्नेछौं
बजार जानकारी साझेदारी
आफ्नो व्यापार मापन विस्तार गर्न मद्दत गर्न तपाईंसँग बजार जानकारी साझेदारी गर्दै
उत्पादन ज्ञान प्रशिक्षण र द्रुत प्रतिक्रिया बिक्री पछि सेवा
उत्पादन प्रशिक्षणले तपाईंलाई ग्राहकहरूको विश्वास प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। र हामी बिक्री पछि समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्न चाँडै प्रतिक्रिया गर्नेछौं
लाभ योजना अनुकूलन र क्षमता समर्थन
प्रतिस्पर्धी मूल्यहरू तपाईंलाई अधिक लाभ प्राप्त गर्न मद्दत गर्न। तपाईंलाई सूची सुनिश्चित गर्न र तपाईंको व्यवसायलाई दिगो बनाउन मद्दत गर्न उच्च उत्पादन क्षमता
कुनै न्यूनतम अर्डर बिना आफ्नो भल्भ अनुकूलित प्राप्त गर्नुहोस्।
भवन C, Longchang Micro-Chuangyuan, No. 26 Hantang Street, Dongcheng जिल्ला, Dongguan, China